Home Aragti-doon Awoodda ku jirto sirta garashada dareenka hoggaamineed
Shanta qodob ee aasaaska u ah dhaqamada hoggaamiyaha wanaagsan.
Hoggaamiyaha caqliga badan... UNSPLASH
Caqliga ku saleysan garashada wanaagsan waxaa loo kala qaadi karaa illaa shan qeyb. Haddii arrimahaas aad si la taaban karo aad u adeegsato, waxaa sare u kacaya caqligaaga.
Sida aad isu aragto waa qaabka aad ku xakameyn karto shucuurtaada, awooddaada iyo waxa aad daciif ku tahay Istiraatiijiyadaha qaar ee kordhinta fiijignaantaada, waxay noqon kartaa mid u baahanqiimeyn, ama in aad qorto wax kasta oo qalbigaaga ku soo dhaca si aad u fahamto, una barato qaabka aad uga falcelineyso.
Muujinta-naftaada waa qaabka ay shucuurtaada u amarto hab-dhaqankaaga. Waa awoodda kuu fududeyneysa in dareenkaaga ku muujiso hadal ama hadal la’aan – qaab aad dhibaato ku ahayn dadka kale. Hal qaab oo wanaagsan oo aad ku xoojin karto qaab muujinta naftaada waa sida aad uga jawaabeyso xaaladaha qaar ee shaqada iyo in aad ku celceliso – sida qaabka aad asxaabtaada kula shaqeysa ula hadleyso.
Dhexgalka bulshada waa heerka barashada naxariista, masuuliyadda bulshada, xiriirka wanaagsan ee dadka kale kaala dhexeeya. Dad badan ayaa ku dadaalaya in xiriir wanaagsan ay la yeeshaan madaxda sare. Hoggaanka qofka haya wuxuu sidaas ku sameyn karaa in uu si dhow u dhageysto dadkiisa, fikradahooda tixgeliyo iyo waxa dhiiragelinta u ah in la sameeyo.
Go’aan gaaridda waa qaabka lagu xakameeyo falcelinta degdegga ah, aanna dhexdhexaad ku noqon karno, waana habka xalinta dhibaatada. Dhibaatooyiinka ka dhaca goobaha shaqada waxaa badanaa sabab u ah in qofka uu xakameyn waayo dareenkiisa xanaaqa, ama dib u istaagi waayo. Tusaale ahaan, dadka waxay isku xiraan qofka iyo dhibka dhacay, balse markan haddii ay shaqa xumo dhacdo, isku dey in aad diiradda saarto waxa qaldan ee aadan eegin qofka – ama ha isku xirin qofka iyo qaladka.
Xakameynta walwalka waxay noqon kartaa seddax marxaladooda: Dabacsanaan, u adkeysiga walwalka iyo filashada wanaagga. Xeerar fudud, Waa awoodda la qabsiga, ka soo gabashada, iyo rajada wanaagsan ee xilliga xaaladaha adag.
Previous articleMa dooneysaa dabeecadahan ugu soo jiidashada badan?
Next articleSida aad uga hortagi karto inuu kugu dhaco cudurka Sokorowga